Tadiavo ny lahatenin'i Steve Jobs izay ao amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Tadiavo ny lahatenin'i Steve Jobs izay miafina ao amin'ny Mac anao
Andro hafa no entinay anao, iray amin'ireo zavatra izay mahatonga anay hahita fa ny rafitra OS X dia mbola misy tsy ampoizina miafina maro. Ny Mac rehetra izay manana ny fampiharana Pejy napetraka ao amin'ny OS X dia ho afaka mahita fahagagana miafina kely.
Kabary malaza izy io, na ny roa amin'izy ireo, an'i Steve Jobs izay miafina ao anaty fampirimana pejy.
Eny eny, araka ny efa nolazainay taminao, dia hampahafantatra fanomezana kely natolotr'i Steve Jobs sy ny ekipany ho ao anaty rafitra ao amin'ny fampiharana pejy izahay ary na eo aza ny fiaingany dia mbola ao amin'ireo kinova ihany io.
Ireo dia lahateny roa samy hafa nataon'i Steve Jobs, ilay lahatsoratry ny fampielezana Think Better ary izay lazain'i Steve tamin'ny voalohany ny teniny tao amin'ny Stanford University tamin'ny 2005. Mazava ho azy, raha te hahita ireo rakitra ireo dia tsy maintsy apetraka ny rindranasa iWork Pages.
Ireto ny dingana tokony harahinao hahitana an'ity atody paska ity:
Manokatra varavarankely an'ny Finder ary tsindrio cmd + Shift + G, izay hanokatra ny Mandeha… ary hanoratra izao lalana manaraka izao izahay:
Eo am-baravarankely izay misokatra dia tadiavo ny fisie antsoina hoe Apple.txt dia ho eo alohan'ny lahatsoratr'ireo lahateny efa natoronay ianao.
Ny andiany voalohany dia ny lahatsoratra mahazatra an'ny fanentanana Think Other, izay nanomboka voalohany tamin'ny taona 1997 sy ny sisa tamin'ny kabary tao amin'ny Stanford University tamin'ny 2005.
Izahay dia mampifandray ireo horonantsary roa izay ahafahanao maheno ny teny amin'ny lahateny roa.
Araka ny hitanao, toa lalina any Cupertino izy ireo, dia manam-potoana handefasana antsipirihan'ny mpiasan'izy ireo sy ny mpanolo-tsaina azy ireo any amin'ny toerana tena tsy azo inoana, fomba amam-panao izay hatramin'ny Macintosh Classic voalohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Tadiavo ny lahatenin'i Steve Jobs izay miafina ao amin'ny Mac anao
Ohatrinona ny karaman'ny mpiasa Apple?
Apple dia mandefa ny beta ampahibemaso faharoa ho an'ny OS X Yosemite 10.10